14 “Ka obi ghara ịlọ unu mmiri.+ Nweenụ okwukwe n’ebe Chineke nọ,+ nweekwanụ okwukwe n’ebe mụ onwe m nọ.+ 2 N’ụlọ Nna m, ọtụtụ ebe obibi dị.+ Ma ọ́ bụghị otú ahụ, m gaara agwa unu, n’ihi na m na-aga ịkwadebere unu ebe.+ 3 Ọ bụrụkwa na mụ agaa kwadebere unu ebe, m ga-abịa ọzọ,+ mụ onwe m ga-anabatakwa unu n’ebe obibi m,+ ka unu wee nọrọkwa n’ebe m nọ.+ 4 Unu maara ụzọ ebe m na-aga.” 5 Tọmọs+ wee sị ya: “Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga.+ Olee otú anyị si mara ụzọ ya?” 6 Jizọs wee sị ya: “Ọ bụ m bụ ụzọ+ na eziokwu+ na ndụ.+ Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.+ 7 A sị na unu maara m, unu gaara amakwa Nna m; site n’ugbu a gaa n’ihu, unu amarawo ya, unu ahụwokwa ya.”+ 8 Filip wee sị ya: “Onyenwe anyị, gosi anyị Nna ahụ, o zuwokwara anyị.” 9 Jizọs wee sị ya: “Mụ na unu ànyị anọwo ogologo oge há otú a, ma, ị mabeghị m, Filip? Onye hụrụ m ahụwokwa Nna m.+ Gịnị mere i ji asị, ‘Gosi anyị Nna ahụ’?+ 10 Ọ̀ bụ na i kweghị na mụ na Nna m dị n’otu, na Nna m na mụ onwe m dịkwa n’otu?+ Adịghị m ekwu ihe m na-agwa unu n’echiche nke onwe m; kama ọ bụ Nna m nke mụ na ya dị n’otu na-arụ ọrụ ya.+ 11 Kwerenụ ihe m kwuru na mụ na Nna m dị n’otu, na Nna m na mụ onwe m dịkwa n’otu; ma ọ́ bụghị ya, kwerenụ n’ihi ọrụ ndị ahụ m na-arụ.+ 12 N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Onye nwere okwukwe n’ebe m nọ, onye ahụ ga-arụkwa ọrụ m na-arụ; ọ ga-arụkwa ọrụ karịrị+ ọrụ ndị a, n’ihi na m na-alakwuru Nna m.+ 13 Ihe ọ bụla unu rịọkwara n’aha m, m ga-eme ya, ka e wee nye Nna m otuto site n’aka Ọkpara ya.+ 14 Ọ bụrụ na unu arịọ ihe ọ bụla n’aha m, m ga-eme ya. 15 “Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-edebe ihe niile m nyere n’iwu;+ 16 m ga-arịọkwa Nna ahụ, ọ ga-enyekwa unu ihe inyeaka ọzọ ka ọ dịnyere unu ruo mgbe ebighị ebi,+ 17 bụ́ mmụọ nke eziokwu ahụ,+ nke ụwa na-apụghị inweta,+ n’ihi na ọ dịghị ahụ ya, ọ maghịkwa ya. Unu maara ya, n’ihi na ọ na-adịgide n’ebe unu nọ, ọ dịkwa n’ime unu.+ 18 Agaghị m ahapụ unu ka unu nọrọ dị ka ndị mmadụ nwụnahụrụ.+ M na-abịakwute unu. 19 N’oge na-adịghị anya, ụwa agaghịkwa ahụ m ọzọ,+ kama unu ga-ahụ m,+ n’ihi na m dị ndụ, unu ga-adịkwa ndụ.+ 20 N’ụbọchị ahụ, unu ga-amara na mụ na Nna m dị n’otu, unu onwe unu na mụ onwe m dị n’otu, mụ onwe m na unu dịkwa n’otu.+ 21 Onye nabatara ihe m nyere n’iwu ma na-edebe ha, ọ bụ onye ahụ hụrụ m n’anya.+ N’aka nke ọzọ, onye hụrụ m n’anya ka Nna m ga-ahụ n’anya, m ga-ahụkwa ya n’anya ma gosi ya onwe m nke ọma.” 22 Judas,+ ọ bụghị Judas Iskarịọt, wee sị ya: “Onyenwe anyị, gịnị mere i ji chọọ igosi anyị onwe gị nke ọma, ọ bụghị igosi ya ụwa?”+ 23 Jizọs zara ya, sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ m n’anya, ọ ga-edebe+ okwu m, Nna m ga-ahụkwa ya n’anya, anyị ga-abịakwutekwa ya wee mee ka ebe obibi anyị dị n’ebe ọ nọ.+ 24 Onye na-ahụghị m n’anya adịghị edebe okwu m; okwu unu na-anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna m bụ́ onye zitere m.+ 25 “Agwawo m unu ihe ndị a mgbe mụ na unu ka nọ. 26 Ma ihe inyeaka ahụ, bụ́ mmụọ nsọ, nke Nna m ga-ezite n’aha m, ga-akụziri unu ihe niile ma chetara unu ihe niile m gwara unu.+ 27 M na-ahapụrụ unu udo, m na-enye unu udo m.+ Adịghị m enye ya unu otú ụwa si enye ya. Ka obi ghara ịlọ unu mmiri, unu atụkwala egwu. 28 Unu nụrụ na m sịrị unu, M na-ala, m na-alọghachikwutekwa unu. Ọ bụrụ na unu hụrụ m n’anya, unu ga-aṅụrị ọṅụ na m na-alakwuru Nna m, n’ihi na Nna m ka m ukwuu.+ 29 Ya mere, agwawo m unu ugbu a tupu ya emee,+ ka unu wee kwere mgbe o mere. 30 Mụ na unu agakwaghị ekwu ọtụtụ okwu, n’ihi na onye na-achị+ ụwa na-abịa. O nweghịkwa ike n’ebe m nọ,+ 31 ma, ka ụwa wee mara na m hụrụ Nna m n’anya, ọbụna dị ka Nna m nyere m iwu+ ka m mee, otú ahụ ka m na-eme. Bilienụ, ka anyị pụọ n’ebe a.